Download cs 1.6 version original ► Counter Strike 1.6 Download
Aprily 25, 2022	Off	By roma
Counter-Strike 1.6 mampiala voly anao amin'ny traikefa fitifirana olona voalohany tsara indrindra miaraka amin'ny fitaovam-piadiana, sarintany ary endri-tsoratra maro azo isafidianana. Ahitana basy poleta, basy manafika, basy mavesatra, basy milina kely, basy, ary basy sniper mba hahafahanao misafidy ny fitaovam-piadiana tsara indrindra araka izay ilainao.
Manomboka amin'ny basy poleta ianao amin'ny fihodinana voalohany, ary tsy manam-bola hividianana fitaovam-piadiana hafa afa-tsy ny voromahery any an-tany efitra, ka tsy maintsy miantehitra amin'ny fahaizanao sy ny pistol Glock ihany ianao. Rehefa avy nandresy tamin'ny fihodinana voalohany ianao dia hanana vola ampy hividianana fitaovam-piadiana tianao.
Professional cs 1.6 Ny mpilalao dia manoro hevitra ny mpilalao vaovao hisoroka ny fividianana ny basy voromahery any an-tany efitra amin'ny fihodinana voalohany ary mitahiry ny vola amin'ny fihodinana manaraka. Ny fitaovam-piadiana rehetra ao amin'ny lalao dia manolotra hafainganana, fahasimbana ary hafainganam-pandeha. Tsy misy safidy tonga lafatra ho an'ny toe-javatra rehetra, fa afaka manandrana fitaovam-piadiana ianao mba hisafidianana ny tsara indrindra ho anao. Ireto ny fitaovam-piadiana dimy tsara indrindra amin'ny sokajy fitaovam-piadiana rehetra misy Counter-Strike 1.6.
Ity fitaovam-piadiana ity dia azo alaina amin'ny dimampolo sy fitonjato dolara ao amin'ny fivarotana lalao ary manana gazety roapolo boribory. Manolotra ny fahitsiana tsara indrindra izy io raha oharina amin'ny pistols rehetra misy amin'ny lalao. Atambatra amin'ny basim-borona na fitaovam-piadiana akaiky hafa tianao hahazoana vokatra tsara indrindra.
Ny p90 dia lalao sub-machine vita any Belzika izay azonao vidiana amin'ny dimampolo amby telonjato sy roapolo dolara amin'ny counter strike hamono fahavalo. Afaka mitondra fihodinana dimampolo ao anaty gazetiboky tokana izy io ary misy taham-pandrefesana avo lenta mba hanalana ilay gazety ao anatin'ny segondra vitsy. Ny fihemorana dia ambany loatra ka tsy ho tsapanao akory fa mitifitra azy ianao, ary tsy misy fiantraikany amin'ny tanjonao izany.
XM1014 dia basim-borona mandeha ho azy izay midika fa tsy maintsy mamerina azy indray mandeha ianao aorian'ny famenoana ny gazety amin'ny boribory. Raha mampiasa azy avy amin'ny elanelana fohy ianao ary mikendry ny vatana ambony amin'ny fahavalo, dia hamono izany na dia manao fitaovam-piarovana aza izy ireo.
Basy fanafihan'ny AUG
Ny basy fanafihan'ny AUG dia afaka mitifitra basy fitonjato mahery ao anatin'ny iray minitra, ary io no safidy tsara indrindra raha mila ady amin'ny halavirana antonony ianao. Basy mavesatra izy io, noho izany dia ho voatohintohina ny hafainganam-pandehan'ny toetranao, fa ny fahasimbana aterany dia manonitra ny lanjany.
M249-SAW basy milina
Ny lanjany ambony indrindra an'ny M249-SAW counter strike 1.6, izay hita ao amin'ny fivarotana amin'ny dimy arivo dolara izay mety ho be loatra ho an'ny mpilalao vaovao. Afaka mitifitra baoritra eninjato mahery ao anatin'ny iray minitra izy ary mahatratra zato ny fahafahan'ny gazetiboky.
Basy sniper G3 / SG-1
G3/SG-1 dia basy sniper mandeha ho azy izay tsara indrindra sy ratsy indrindra amin'ny lalao satria voarara amin'ny ankamaroan'ny mpizara amin'izao fotoana izao. Ny mpampihorohoro ihany no afaka mampitafy azy io, ary manana sehatra azo ampiasaina ahafahana mikendry fahavalo avy lavitra.
Tagscounter strike 1.6 Download cs 1.6 cs 1.6 Download cs dowload Download counter-strike Download counter-strike 1.6 misintona cs Download cs 1.6 Download cs 1.6 dikan-tany tany am-boalohany Antsasak'aina original cs valve download